Superegg Ukufakelwa Imifanekiso Eqingqiweyo - Imagazini yoyilo
Ukufakelwa Imifanekiso Eqingqiweyo
Ukufakelwa Imifanekiso Eqingqiweyo I-Superegg imele ukuphindaphindwe ngokukhawuleza kwee-capsules zekofu enye, efanekisela ukulungeleka komntu kunye nefuthe lakhe kwindalo. Kubonakala ngathi kutyhilwe ngentla komhlaba, ubume bejometri yokuchwetheza, njengoko ibhalwe sisazi sezibalo uGabriel Lame, inamachaphaza e-khompawundi alahliweyo acwangcisiweyo alungiselelwe kwimigca egqibeleleyo. Amava e-visceral afaka isibukeli kuzo zonke ii-angles kunye nomgama. Zingaphezulu kwe-3000 iicaphule eziqokelelweyo ngomnxeba oya kwisenzo seendaba zosasazo loluntu kunye noluntu lwalapha. I-Superegg ivumela ababukeli ukuba basebenzise inkunkuma kwaye bakhuthaze iindlela ezintsha zokuphinda zisetyenziswe.
Igama leprojekthi : Superegg, Igama labayili : Jaco Roeloffs, Igama lomthengi : Jaco Roeloffs.
Ukufakelwa Imifanekiso Eqingqiweyo Jaco Roeloffs Superegg